China Industrial PSA nitrogen na-ewepụta osisi maka ire Nitrogen gas Ime igwe na ndị na - eweta ya | Ma ọ bụ
Industrial PSA nitrogen na-amụba osisi maka ire Nitrogen gas Ime igwe
The ụlọ ọrụ na ngwaahịa na-abịakọrọ ikuku dị ka akụrụngwa, site akpaghị aka usoro, abịakọrọ ikuku ọcha, nkewa, mmịpụta. The ụlọ ọrụ nwere isii usoro nke cryogenic ikuku nkewa akụrụngwa, abịakọrọ ikuku ọcha ngwá, PSA PSA adsorption ikuku nkewa akụrụngwa, nitrogen na oxygen ọcha ngwá, akpụkpọ ahụ nkewa ikuku nkewa ngwá na VPSA oxygen mmepụta akụrụngwa, na ihe karịrị 200 iche iche nke nkọwa na ụdị.
Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ nwere "OR" dị ka ụghalaahịa edenyere aha, nke a na-ejikarị eme ihe na coal, ike elektrọnik, petrochemical, ọgwụ ndu, roba roba, eriri na eriri kemịkal, nchekwa nri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ngwaahịa n'ọtụtụ isi mba na-arụ ọrụ.
Perationkpụrụ Ọrụ nke PSA Generogen Generation:
PSA nitrogen ọgbọ na-anabata carbon molekụla sieve dị ka adsorbent onye ike nke adsorbing oxygen bụ ibu karịa adsorbing
nitrogen. Ndị mgbasa ozi abụọ ahụ (a & b) na-echekwa mgbasa ozi ọzọ ma na-agbanweghachi iji kewaa oxygen na nitrogen na ikuku iji nweta ọcha
nitrogen site na Auto-arụ ọrụ valves na-achịkwa PLC.
Igirigi: -40 ℃
Ọnọdụ Ọkwọ ụgbọala ： Electric Driv
Dị Cooling ： Ikuku Ikuku
Elu na-agbanwe agbanwe ： ≤1000m
Ikuku ikuku: ≥16.7m3 / min
Ndepụta nhazi: Ihe mgbakwunye 1
Voltaji: 220V / 1PH / 50HZ
Nke gara aga: 90% -99.9999% Ọcha na Nnukwu ikike PSA Nitrogen Generator
Osote: PSA Nitrogen Production gas plant Psa Nitrogen Generator Equipment Psa Nitrogen Machine